Lighttù Ìhè Chineke - WRSP
Òtù Ìhè Chineke
ATỤKWA NDỊ ỌHỤRỤ NKE Chineke
1945: Takahashi si na Burma lọta mgbe Agha Pacific gasịrị meriri Japan wee si Nagano kwaga Tokyo.
1960s: Takahashi malitere Saturday Association (Ọ ghaghịgị Kai ), nzukọ nzukọ na-adabere na ahụmahụ ime mmụọ ya na ememe Saturday na ụlọ ya na Minato Ward nke Tokyo.
1968 (November): Takahashi nwere ahụmahụ zuru oke nke ime mmụọ ya. Ọ gbanwere aha otu ahụ ka ọ bụrụ tokpụrụ Iwu Chineke (Shinri no Kai ), ma ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị so na ya mere ka o siere Takahashi ike ịnọgide na-enwe nzukọ n'ụlọ ya.
1969 (Eprel 8): Otu a kwagara n'ime okilọ Yaoki dị na mpaghara Asakusa nke dị na Tokyo ma gbanwee aha ya na Nnukwu Godwa Ọkụ Ọchịchị Chineke (Dai Uchzu Shinkō-Kai ).
1970: Takahashi gbanwere aha okpukpe ọzọ, na-ahọrọ aha Bekee maka otu ahụ, Chineke Light Association ma ọ bụ GLA (akpọrọ GLA), iji gosipụta ebumnuche nke okpukpe iji gbasaa gafee Japan.
1971: Takahashi gara n'ụlọ nsọ nke Zuihōkai, (otu n'ime ọtụtụ okpukpe ọhụrụ nke Reiy ū kai) na Higashi Osaka. Zuihōkai jikọtara ya na GLA ma kpọọ ụlọ ọrụ ọhụrụ "GLA Kansai." Onye ndu Zuihōkai hapụrụ okpukpe ya maka GLA wee tụgharịa ụlọ nsọ ya na GLA nke ghọrọ isi ụlọ Osaka nke otu ahụ.
1971: E bipụtara ọtụtụ akwụkwọ site na Takahashi Shinji: Nchọpụta nke Obi, Science Collection (Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu: kagaku-hen), Nchọpụta nke Obi, Isi Nchịkọta Chineke (Keywords: shinri-hen), na Nkwupụta okwu na obi Sutra: Ịmata Amamihe ahụ (Gensetsu aka mkparaị: naizai sareta eichi no kyma ọ bụ ), nke Sampoh Publishing Co., GLA bipụtara.
1973 (28 March): GLA natara nkwado n'okpuru iwu ndị Japan dị ka Onye Okpukpe Iwu (shūkyūhōji).
1973: Takahashi bipụtara Ụzọ nke Anụ Na-agụ Anụ (Gaki-dō). Mmalite nke Obi (Kokoro no genten), Nchọpụta nke Obi: Ihe Ịgba Akaebe Na-egosi (Ọ bụrụ na ọ bụghị: peopleho-hen), Ụmụ mmadụ / Buddha Shakyamuni: Nke kachasị mma (Ntọala ntinye na ntinye) e bipụtarakwa.
1974: Sampoh bipụtara Takahashi Shinji's Nduzi maka obi (Ọ bụrụ na ọ bụghị) na Inweta Nghọta (Shingan ka echeku).
1976 (March): Na ogbako GLA na Shirohama, Wakayama Prefecture, Takahashi, Shinji kwetara na ada ya nwanyị bụ Keiko ịbụ onye ndu na ndụ ya niile wee họpụta ya onye nketa mmụọ ya.
1976 (June 25): Takahashi Shinji nwụrụ mgbe ọ dị afọ iri anọ na asatọ nke akụrụ na ọrịa imeju, ọ bụ ezie na ndị otu na-adị ngwa ikwu na ọnwụ ya sitere na "ọnwụ site n'ịrụbiga ọrụ ókè" (Iwuọshi ). Afọ iri abụọ gara aga, ọ bukwara amụma na ya ga-anwụ mgbe ọ dị afọ iri asatọ na asatọ ma kọwaara ya nwunye ya mgbe ọ gwara ya.
1976 (July 10): Na Mmemme Obi ekele na Nkwa na Tokyo, Takahashi Keiko kwere nkwa iji rụọ ọrụ nna ya wee wuo utopia n'ụwa.
1977: Takahashi Keiko dị afọ iri na itoolu, nwa akwụkwọ nke nkà ihe ọmụma na Mahadum Nihon, nọchiri nna ya dị ka onye ndu ime mmụọ nke GLA.
1977: GLA Kansai, jụrụ ịnakwere Keiko dị ka onye nketa mmụọ nke GLA, kewara ya na otu ahụ, kpọọ otu n'ime ndị na-eso ụzọ mbụ Takahashi Shinji, Kishida Mamoro, onye ndu ime mmụọ ya.
1980: Takahashi Keiko gosipụtara ntọala nke ozizi mbụ ya site n'echiche nke Atọ Atọ: Usoro ihe omuma, (Kiban-ron), Akwụkwọ nke Ozi nke Onwe (Jigo-ron), na Usoro nke Mmekọrịta Na-edozi Onwe (Kyōdō-ron).
1993-2000: Takahashi Keiko mepụtara ọtụtụ usoro ime mmụọ iji nyere ndị òtù aka ịbụ bodhisattva dị ka mkpụrụ obi mgbawa (bonnōmap), map nke madu (jinsei chizu), na nghọta-azịza-eziokwu (juhatsushiki).
1999: Ụzọ nke Ekpere, bụ ugbu a ederede dị nsọ nke GLA.
2001-ugbu a: Takahashi Keiko gosipụtara ọtụtụ usoro na ọrụ ndị ọzọ: Genesis Project, Reestablishing the Bond with Big Cross, Na-emeri Bonnō, na Excavating Bodaishin (echiche Buddha nke a na-ahụ n'ime mmadụ niile).
Takahashi Shinji (1927-1976), a mụrụ Takahashi Haruo, a mụrụ n'obodo Saku, Nagano Prefecture, Japan, na September 21, 1927. Ebe ọ bụ na gburugburu afọ 10, Takahashi malitere inwe ahụmahụ na-apụtaghị ìhè nke mere ka o nwee mmetụta na o nwere onye ọzọ ma ọ bụ akụkụ astral (Mo hitori no watashi ) dị iche na ahụ ya. N'ịgbalị ịghọta nke ọma echiche nke onye ọzọ ma ọ bụ nke ime mmụọ, Takahashi malitere ịga ụlọ nsọ Hakusa, obere ụlọ nsọ Shinto dị nso n'ụlọ ya, iji tụgharịa uche. Ọ bụ ezie na e debara aha ezinụlọ Takahashi n'akwụkwọ na ụlọ nsọ Buddha Buddha Sōtō Zen, njikọ ha ka bụ ma ọ bụ mkpakọrịta nkịtị. N'agbanyeghị ahụmahụ ime mmụọ ndị mbụ a, ọrụ Takahashi Shinji nọgidere bụrụ nke sayensị. Ọ gara ụlọ akwụkwọ sekọndrị ndị agha wee depụta ya dị ka onye ọkwọ ụgbọ mmiri. Mgbe Agha Worldwa nke Abụọ gasịrị, nke ọ nọrọ na Burma, ọ gụrụ injinia ọkụ na kọleji nke sayensị na teknụzụ na Mahadum Nihon na Tokyo; ọ gụghị akwụkwọ.
Takashashi mechara guzobere Koden Industry Co., Ltd., ụlọ ọrụ na-eme ihe dị ukwuu nke na-arụpụta akụkụ eletrikiiki. Site na njedebe 1960s, Takahashi kwuru na ya na ndị mmụọ ya na-akparịta ụka na n'ikpeazụ iji nweta nduzi nke ọma site na nduzi nke ndị mmụọ a ndị mechara gosi onwe ha dịka Kraịst na Moses. Takahashi maliteziri ọrụ ya dịka onye ndú okpukpe na-ede banyere ahụmahụ ya ma na-adọta ọtụtụ ndị n'aka ya site n'akwụkwọ ya, nkwupụta dị omimi, na àgwà dị mma.
Takashashi wee mara amara maka ọpụpụ ya nke mmụọ ndị na-agba aghara na ndị rụrụ arụ na ndị ọ na-ekwu okwu nwayọ wee ziga ha. Ọ kpọrọ ozizi ya Divine Principle (shinri ) na Ezi Iwu (shuhō ) ma kụziere ya n'ụzọ ọ kwenyere na ọ dị adị n'oge ndụ Mosis, Jizọs Kraịst, na Buddha, onye ọ bụla n'ime ha rụrụ ọrụ ebube ma ọ bụ ihe akaebe (ndị mmadụō ). E wezụga na ọgwụgwọ dị ebube, fundamentally Takahashi kụziri ụzọ Buddhist Eightfold Path (ahịhịaudō) nye ụmụazụ ya jikọtara ya na ụdị nke Naikan ma ọ bụ ntụgharị uche onwe onye. Na Naikan omenala, onye ọrụ ahụ na-etinye otu izu na ntụgharị uche dịpụrụ adịpụ (nke sitere na 6: 30 ruo 9 pm) nke na-elekwasị anya na naanị ajụjụ atọ gbasara nne ha, mgbe ahụ nna: Gịnị ka m nwetara? Kedu ihe m nyereghachi? na Nsogbu gini ka m kpatara? Dị ka onye na-atụgharị uche ga-ahụrịrị onwe ya n'ọnọdụ onye ji ụgwọ, Naikan bụ ụzọ doro anya iji zụlite ekele. Takahashi hụrụ na omume ahụ bara ezigbo uru, mana ogologo izu dị ogologo maka ọtụtụ ndị mmadụ, ọ dịkwa egwu maka ndị ọhụụ. N'ihi ya, o kere n'ụdị ederede nke Naikan ka na-adabere na ịkụzi ekele.
Dị ka onye na-eme nchọpụta okpukpe, Takahashi ekweghị na okpukpe kwesịrị ịchọ inweta ego ha ga enweta. Ya mere, n'oge ndụ ya, Takahashi nọgidere na-arụ ọrụ dị ka njikwa ụlọ ọrụ nke Koden Industry nke o si nweta ọrụ ya ma kwado nwunye ya na ụmụ nwanyị abụọ, na mgbe ụfọdụ ọbụna GLA.
Mgbe ọ dị afọ iri anọ, mgbe Takahashi Shinji bịara ghọta na ebe obibi nke onye ọzọ ya bụ mpaghara ime mmụọ nke dị na ụwa nke uche, ọ malitere "Saturday Saturday" ("Ọ ghaghịgi-Kai ). Nke a mere n'ụlọ ya na mpaghara Minato nke Tokyo ebe ndị nwere mmasị na mmepe ime mmụọ nwere ike ịmụta ihe site na ahụmịhe ya. Nzukọ a na-ezighi ezi nwetara nnukwu ume wee banye na Association nke Akwụkwọ Nsọ (Shinri no Kai) site na Nọvemba, 1968. Iji nabata ọnụ ọgụgụ na-eto eto nke ndị na-eso ụzọ, na 1969 otu ahụ kwagara n'okpukpu nke atọ nke ụlọ na mpaghara Asakusa nke dị na etiti Tokyo na gbanwere aha ha na Great Universe God Light Association (Dai Uchū Shinkō-Kai). Na 1970, Takahashi gbanwere aha mkpakọrịta ahụ ọzọ iji gosipụta ịdị mkpa nke ozi ya na ebumnuche ụwa niile site na ịhọrọ aha bekee, Chineke Light Association. Agbanyeghị, ndị otu na-ekwukarị n'okpukpe ha site na mgbatị GLA, akpọ GLA. Na 1971, mgbe onye ndú nke ọgbọ nke abụọ nke okpukpe ọhụrụ Zuihōkai, Nakatani Yoshio, zutere Takahashi Shinji na Osaka, o kwenyesiri ike na ikike ime mmụọ nke Takahashi na o kpebiri ịhapụ Zuihōkai, ghọọ onye na-eso ụzọ Takahashi, ma soro GLA. O nyeziri ụlọ nsọ Zuihōkai na Higashi Osaka ka GLA bụrụ ebe etiti okpukpe na Kansai. Kemgbe Machị, 1973, GLA ahọpụtala okpukpe a ma ama (shezouhöjin) echebe n'okpuru iwu Japan.
Na 1976, Shinji nwụrụ n'ihi akụrụ na akụrụ imeju, ọ bụ ezie na ndị GLA na-agbasi mbọ ike na ọ nwụọrịrị nke "ọnwụ site n'ịrụ ọrụ" (Iwuọshi ). Dị ka onye ndú nke nzukọ na-eto eto na-eto eto, onye edemede nke akwụkwọ na isiokwu ime mmụọ, onye na-elekọta ụlọ ọrụ electronic na-enye ntọala, onye nduzi na onye nduzi nke mmụọ nye ndị GLA, Takahashi leghaara onwe ya anya ma rahụ ụra naanị atọ ruo awa anọ n'abalị . Mgbe ọ nwụrụ, ndị GLA gụrụ ụfọdụ ndị 8,700 bụ ndị na-agbaso ike na Tokyo (Kantō) na Osaka (Kansai). Tupu ya anwụọ, Takahashi buru amụma maka afọ ọ gafere, ya mere ọ nọ na-achọ onye ga-anọchi ya n'afọ ikpeazụ nke ndụ ya.
Ọ bụ ezie na ọ lere onyeisi ndị mmụọ ozi Michael anya dị ka onye ga-anọchi ya, ọ maghị onye n'etiti ndị na-eso ụzọ GLA ya nwere ụdị a. Agbanyeghị, n'oge ogbako na Shirohama, Wakayama Prefecture (ihe omume akpọrọ "Shirohama Legend"), ekwuru na Takahashi ghọtara na mkpụrụ obi nwa ya nwanyị bụ Keiko nọ na-eduzi mkpụrụ obi nke ya n'oge ndụ ya niile na tupu amụọ ya, nakwa na ọ bụ onyeisi ndị mmụọ ozi Michael na ndụ gara aga. Ha abụọ ghọtara nke a na Shirohama ebe mkpụrụ obi na mkpụrụ obi site na nna gaa na nwa nwanyị.
Mgbe Takahashi nwụsịrị, Keiko, mgbe ọ dị afọ iri na itoolu, mere ka ọha mmadụ mara na ọ bụ Onyeisi Ndị Mmụọ Ozi Michael n'oge mgbanwe oge GLA dị ka ndị Michael Movement. N'oge ahụ, Keiko na-apụtakarị uwe elu dị ogologo dị ka onyeisi ndị mmụọ ozi ma kwuo na Chineke zitere ya. Ngosipụta onwe ya dịka onye ndú ime mmụọ na onye nketa nke GLA, nke e mere na nkwalite ihu ọma nke kpakpando, kewapụrụ ọtụtụ ndị òtù n'oge a ma bụrụ isi iyi nke ọtụtụ mmeri. Otú ọ dị, n'oge a, onye edemede a ma ama akụkọ sayensị bụ Hirai Kazumasa sonyeere GLA ma dee edemede iri abụọ nke oke dike (Genma Taisen) nke Keiko jere ozi dị ka onye nlereanya nlereanya.
Dị ka ọ na-adịkarị n'okpukpe mgbe onye nchoputa ha nwụsịrị, nnukwu esemokwu na-enye nsogbu dị ka esemokwu na-ebilite maka ezigbo onye nketa mmụọ nke okpukpe. GLA na-enye ihe atụ kachasị mma nke ihe a. Ọ bụ ezie na Takahashi akpọwo nwa ya nwanyị Keiko ka ọ bụrụ onye nketa ya na Wakayama, ụfọdụ ụmụ nwoke na-eso ụzọ bụ ndị nọ nso Takahashi Shinji (Hota Wase, Haba Taketsugu, na Kishida Mamoro) chere na Takahashi ahọrọla Keiko ka ọ bụrụ onye nketa ya n'ọnọdụ nke ahụike na ya mere mkpebi adịghị mma. Ha lere onwe ha anya dị ka ndị nketa mmụọ GLA. Chino Yūko, bụ onye mechara hiwe ụlọ nyocha Chino Shōhō / Pana Wave, o doro anya na ọ nwere ọtụtụ ọhụụ mgbe Takahashi nwụsịrị nke mere ka o kwenye na ọ bụ onye na-anọchi mmụọ nke Takahashi. Nne Chino, onye bụ onye otu GLA na Osaka, gakwuuru ndị ọrụ GLA banyere atụmanya a mana a kwara ya emo maka aro ahụ. Chino wee chọta nzukọ ya. Ya mere, ikike nke izizi na izi ezi nke Keiko na-agba mgba n'ọtụtụ ihu. GLA mere ka ọ ghara inwe ọhụụ banyere ihe ịga nke okpukpe. Kishida Mamoro mechara bụrụ isi nke GLA Kansai, naanị otu onye mmekọ GLA nke dịpụrụ iche na Takahashi Keiko, wee gaa n'ihu na-elekwasị anya na nkuzi nke Takahashi Shinji. GLA Kansai gakwara n'ihu na omume nke ndụ gara aga glossolalia nke Takahashi bidoro nke ndị otu na-asụ asụsụ dị iche iche nke ekwenyere na ha bụ asụsụ oge ochie, ọkachasị nke Egypt, Israel, India, na Gris. Mgbe Takahashi dị ndụ, ọ ga-enwe mkparịta ụka n'asụsụ ndị a n'oge gara aga na ndị otu ya.
Tokyo GLA, nke Takahashi Keiko na-achị, dara n'oge afọ Michael ma malite ịmalite ịchọta ka Keiko chọtara ụzọ nke aka ya ma guzobe ikike nke aka ya, na-ewepu ụfọdụ omume metụtara GLA mbụ, dị ka ndụ gara aga glossolalia. GLA etolitela ma gbanwee n'okpuru nduzi Keiko ma ugbu a, ọ bụ òtù okpukpe a haziri ahazi nke ụfọdụ ndị òtù 23,000 (ka bụ otu n'ime okpukpe ọhụrụ ndị Japan) kewara n'ime afọ ise na / ma ọ bụ ndị na-arụ ọrụ ọrụ bụ ndị ha na-eme nzukọ ọmụmụ ihe kwa afọ na ihe omume. GLA na-edebe isi mpaghara mpaghara asatọ; ha dị na Hokkaido, Tohoku, Okinawa, Hokuriku, Chukyo, Kinki (Osaka, Kyoto, Shiga), Chugoku-Shikoku, na Kyushu. Enwere ebe iri isii na ise ndị ọzọ na Japan. Isi ụlọ ọrụ (sogoị na-eme ) dị na Asakusa na Tokyo. Ugbu a, ọ nwere nkewa mba na-arụ ọrụ nke na-achịkọta nsụgharị nke akwụkwọ Takahashi Keiko ma na-akwalite oke ọrụ mba ofesi. GLA nwekwara ụlọ ezumike nka na Yatsugatake, Yamanashi Prefecture, nke na-eje ozi dị ka ogige ntorobịa oge ezumike maka ndị otu.
Takahashi Keiko anọgidewo na-aba ụba n'oge ọ bụla ọ bụ onye ndu mmụọ nke GLA. N'etiti aha ya nke Sampoh bipụtara Mgbasa ozi bu: Ngalaba nke Ndụ: Maka Mkpụrụ Obi Na-adịghị Mma Ugbu a na Ruo Mgbe Ebighị Ebi (Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị ga-eme ihe ọ bụla) (1982), Akwụkwọ Mkpughe: Maka ndụ ebighị ebi (Na-ehichaomeseiki, mokuo-hen: eien no seimei in itaru tame ni ) (1992), Ezi Jenesis, Akwụkwọ nke Eluigwe: Eziokwu zuru ezu nọ ebe a (Na-ehichaomeseiki, tenjo-hen: subete no shinjitsu, ima koko ni ) (1993), Nchọpụta: Na-abịakwute Eziokwu nke Ụwa (Kwadoro: ị na-enweghị ike ọ dịghị sekkin) (1996), Ụzọ nke Ekpere (Inori no michi) (1999), Nsogbu Ukwu ahụ (Gurando charenji ) (2000), Ezi Jenesis, Akwụkwọ nke Hel: Ugbu a, A Na-ekpughe Eziokwu Banyere Mkpụrụ Obi (Na-ehichaỌkọlọtọ, ụnyaahụ na-acha ọcha: ma ọ bụrụ na ọ bụghị shinjitsu) (2002), Ịkpọ oku na-aza: Ụjọ nke 21st Century (Njikọta: 21 na-emechi ya ) (2002), Ihe Ị Kasị Chọrọ Ịmara banyere Ndụ: N'ebe Era nke Big Cross (Jinsei de ichiban shiritakatta koto: biggu kurosu no jidai he) (2003), Ngwá Agha Ọhụrụ: Nkwupụta - "M Ga-agbanwe Onwe M" (Lee foto: watashi ha elimasu sengen) (2003).
Nkwenkwe na ozizi Takahashi Shinji malitere site na nkatọ dị egwu nke ọha mmadụ dị na Japan dị ka otu n'ime ihe onwunwe juru ebe niile. O kwughi na okwu ya bu “ihe” ma na okwuchukwu mgbe o kwuru okwu banyere “studymuta ihe” nke Japanbenkyō). Ihe omuma na omumu abughi ihe okwutara, kama obu ichota ihe omuma iji nweta uzo nke otu mahadum di elu nke obodo nke kwadoro oru di nma mgbe gụsịrị akwukwo. Maka Takahashi, echiche a na-agụghị akwụkwọ tinyere itinye aka na inweta ihe ọmụma dịka ngwaahịa n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ na usoro nke anyaukwu jupụtara. Banyere nhọrọ okpukpe dị n'etiti ọha mmadụ, ya bụ, Buddha na Iso Christianityzọ Kraịst, o lere ha anya ka ha bụrụ ndị ahaziri ahazi na agụmakwụkwọ, nke sitere na imirikiti ihe ọkụkụ ndị ọkà mmụta. N'ihi ya, okpukpe abụọ ahụ efunahụ ihe ha na ihe oriri ha, eziokwu nke Takahashi chọrọ iji weghachi ezi Iwu ya (shuhō).
Karịsịa, Takahashi Shinji kwuru na onye ọ bụla nwere ndụ ebighi ebi dị ka mkpụrụ obi na-alọ ụwa. Ọ hụrụ ọrụ ya dị ka nke iji nyere ndị mmadụ aka ịkpọtụrụ akụkụ a zoro ezo n'ime obi / uche ha. Ọ kuziri na mgbe mmadụ nwụsịrị, mkpụrụ obi mmadụ ga-abata n'ime ụwa nke kwekọrọkarị n'àgwà ha dịka ha biri n'ụwa e jiri ogo ole mkpụrụ obi mepụtara tụọ; ka ìhè na n’iru, ihe n’iru na nmekorita nke Chineke. N'elu usoro, ụwa ndị a bụ: Hel, Astral, Spirit, God, Bodhisattva na Tathagata. Dika uzo esi etolite nkpuru obi inwe nkwekorita na iwu nke okike, o kuziri uzo di elu nke uzo asatọ (ahịhịaudō) na Buddha akụziwo na ụdị nke Naikan na-echezi echiche dị mkpirikpi maka ntụgharị uche onwe ya na ịnata ìhè Chineke n'ime mkpụrụ obi.
Takahashi kweere na ihe ọ kpọrọ Akwụkwọ Nsọ (shinri) ma ọ bụ iwu nke okike, Chineke họpụtara ya. Ndị a bụ otu ihe ahụ n'oge Jizọs Kraịst, Buddha, na Moses, ndị isi okpukpe atọ ndị Takahashi kacha lekwasịrị anya.
Na sutra nke o dere, Heart Sutra (Shingyō), eluigwe na ala anyị bi na ya na-achịkwa Mmụọ Nsọ dị ukwuu (Dai Uchū ma ọ bụ Dai Shinrei) nke na-eme ka ihe niile dị n'otu. Ihe omuma a bu Chineke na eluigwe na ala bu aru nke Chineke. N'elu eluigwe na ụwa ụwa anyị bụ naanị cell n'ime nnukwu ahụ, ma a na-ewere ya dịka nnukwu ụlọ nsọ nke Mmụọ nke na-arụ ọrụ dịka ebe ọzụzụ maka mkpụrụ obi. Ndị na-agụ akwụkwọ na ọkwa nke mmụọ na-ebi n'ụwa ma na-agagharị na njem na-adịghị agwụ agwụ nke njem site n'oge gara aga, ugbu a na n'ọdịnihu. Uzo a di ndu ka nkpuru obi we me onwe ha ka ha di ike. Ọ kụziri na anyị bi n'ime ya phenomenal ụwa. Mgbe anyị nwụrụ anyị laghachiri na ezigbo ụwa. O kwenyere na mkpụrụ obi na-eto site na samsara ma ọ bụ ọnwụnwa mkpụrụ obi na-ezute n'oge ndụ ya, ọ na-arịwanye elu na-aga n'ihu na nkwekọrịta site na mmepe nke ọmịiko na ịhụnanya. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke usoro a bụ iwulite utopia ma ọ bụ Buddhaland dị ka mmụọ nsọ Chineke si dị. Nghọta mgbe ahụ bụ harmonization nke microcosm anyị na macrocosm.
N'adịghị ka ozi nna ya dị mkpirikpi afọ asaa, Takahashi Keiko eduzila GLA ugbu a ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri anọ. N'ime oge a ọ wukwasịla ntọala Buddhist nke nna ya ma mekwuo ka echiche ndị Kraịst banyere mkpụrụ obi mmadụ na ọrụ ya pụrụ iche. Takahashi Keiko na-akụzi na mkpụrụ obi ọ bụla nwere ozi na isi ya nke na-anọchite anya ọchịchọ miri emi ma ọ bụ ọchịchọ ya iji mezuo. Ọchịchọ a maka mmezu bụ ihe na-eme ka mkpụrụ obi nọgide na-agagharị n'ọtụtụ ndụ. Takahashi Keiko emepewo ọtụtụ usoro ọgụgụ isi na usoro ọgwụgwọ dịka "nghọta - nzaghachi –eziokwu" (juhatsushiki ) (ju-marau-shiki ), ihe nlereanya nke otu onye si emeso ụwa nke dabeere na ozizi Buddha nke "ihe kpatara ya-gburugburu ebe obibi-arụpụta" (in-en-kahō ) nke nke in bụ kpọmkwem ihe kpatara ihe omume, nke en bụ ọnọdụ ndị ọzọ ma ọ bụ ọnọdụ gburugburu ebe obibi na kahō bụ eziokwu nke na-arụpụta. The "nghọta" (ju) na-anọchite anya ụzọ ndị mmadụ si enweta ozi site na nzacha onwe ha. "Nzaghachi" (ọka) bụ omume ma ọ bụ nkwupụta dị na mpụga ụwa dabere na nghọta mmadụ na-ele mmadụ anya n'ihu. “Eziokwu” (shikii) bụ okwu Buddha nke na-egosipụta eziokwu nke na-esite na nghọta na nzaghachi. Ndị mmadụ amaghị na ha onwe ha juhatsushiki , n'ihi na ọ bụghị ihe ọ bụla e kere ọhụrụ na nke ọ bụla, ma ọ bụ ihe nchịkọta nke ahụmahụ oge gara aga na ndụ a na ndụ gara aga. Nsonaazụ nke usoro ihe siri ike siri ike na-esiteworị bụrụ ndị a kwadoro na nhazi na akpaka nzaghachi. Ya mere, maka Takahashi Keiko, n'ihi na mkpụrụ obi na-adịru mgbe ebighi ebi, ọ bụghị "nkwupụta nkịtị" mgbe a mụrụ ya, ma ọ dị ugbu a na-acha ọbara ọbara. Ọ dị mkpa ka onye ọbụla chọpụta "agba" nke mkpụrụ obi ya. Nke a bụ ọrụ mbụ Keiko setịpụrụ ka ndị òtù ya mezuo.
Omume nile nke mmadu bu ihe sitere na nmekorita nke di n'etiti ime na elu elu site na okwu nke onye obula puru iche juhatsushiki. Maka ụfọdụ juhatsushiki Ebumnuche dị iche iche na-eme ka ha nwee ụdị àgwà anọ dị iche iche ma ọ bụ "ụgha onwe gị": Onye Na-atụkwasị Obi, Onye Na-ewe iwe-Onye Nwụrụ Anwụ, Onye Na-ahụ Onwe Ya, Onye Nwee Obi Ụtọ. Keiko ejirila okwu ndị dị ka: "M ga-agbanwe onwe m" ma ọ bụ "gbanwee onwe m, ma gbanwee ụwa." Ihe ka ukwuu n'ime ọrụ ndị o mepụtara, dị ka Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ na amamihe Akwụkwọ, usoro abuo maka ederede ederede, choro azịza nye nsogbu nile obula na onwe ya.
Na GLA dị ugbu a n'okpuru Takahashi Keiko, ndị òtù na-aga nzukọ ọmụmụ ihe na mpaghara ha, ìgwè ọmụmụ ihe, ma na-ekere òkè n'otu n'otu n'ihe omume dịka ịdegharị ekpere site na ederede GLA, Inori no Michi/Ụzọ nke Ekpere. Tupu nzukọ ma ọ bụ izute, ndị òtù jupụta Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ or Ntụziaka Amamihe dịka ụzọ isi eche echiche banyere ọnọdụ ime mmụọ nke ha na-abanye n'ọnọdụ na ihe ga-esi na ha pụta na ha ga-enwe mmetụta.
E nwere ụbọchị pụrụ iche ise n'oge afọ mgbe ndị nnọkọ gbakọtara na ọnụ ọgụgụ buru ibu:
Nzukọ Afọ Ọhụrụ (Shinnen no tsudoi) - emere na Jenụwarị 1, bụ ụbọchị mgbe ndị otu gosipụtara nkwenye nke mkpụrụ obi ha.
Mgbakọ Mgbakọ (Zenyu no tsudoi) - nke a na - eme n'April, na - agba ntọala GLA.
Nzukọ Ekpere (Inori no tsudoi) - emere na June 25, na-echeta ọnwụ nke onye nyocha GLA, Takahashi Shinji.
Ụbọchị ọmụmụ (Gotanjō no tsudoi) na-echeta ụbọchị ọmụmụ Takahashi Keiko na October 24.
Ụlọ Ekele (Kansha enweghị tsudoi) - nke emere na Disemba, bụ ụbọchị iji tụgharịa uche na afọ gara aga na iji obi ekele cheta ihe onye natara.
Takahashi Keiko bụ onye ndú ime mmụọ nke GLA ugbu a. N'ịbụ onye a mụrụ na 1956, nanị afọ ole na ole mgbe Ọrụ America nke Japan (1945-1952) gasịrị, mgbe mba ahụ jupụtara n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, karịsịa America, ọdịbendị emetụtawo Keiko n'ụzọ miri emi. Site n'aka ya mmetụta a dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ emeela ka GLA zọọ. Onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Nihon na nkà ihe ọmụma, ọtụtụ n'ime ndị dike ọdịbendị Keiko (ma e wezụga Mahatma Gandhi na Albert Schweitzer) bụ ndị ụwa: Florence Nightingale, Henri Dunant, Rachel Carson, Helen Keller, Copernicus, Heinrich Schliemann, Thomas Edison, Oswald Spengler, Arnold Toynbee, na Andrew Carnegie. N’akwụkwọ ya, o webatara ọtụtụ okwu bekee na katakana, abụghị ndị nwere ike ịbịakwute ndị agadi, ma ha nyere GLA otu flair nke oge a na nke ụwa.
Takahashi Keiko ugbu a na-elekọta otu nzukọ ekewara n'ime ndị isi ise na ihe omume ahaziri dị ka afọ na okike nke ndị òtù:
Mahadum nke obi zuru oke / obi (Hosshin Daigaku) bụ maka ndị mmadụ iri isii na afọ ma karịa. A na-enwe nzukọ ọmụmụ ihe ndị a na ụlọ ndị dị ala na mpaghara dị iche iche nke mba ahụ.
Frontier College (Furonchia Kareji ) bụ maka ndị nwoke malite n'afọ iri atọ ruo iri ise na itoolu na-arụkwa ọrụ ndị inyom nke afọ ndụ ahụ.
Ụlọ Akwụkwọ Ntorobịa (Gbanyụọ) bụ maka ndị na-eto eto si n'ụlọ akwụkwọ ruo afọ iri atọ. Òtù a na-ezukọta ugboro anọ n'afọ.
Onye nwere uche na-elekọta ụlọ akwụkwọ (Kokoro nke Kango Gakkō) bụ maka ndị inyom dị afọ iri atọ na iri ise na itoolu, ma ọ bụ ndị nne, ụmụ nwanyị na ndị nwunye, ndị niile na-akọwa dị ka ndị nlekọta.
Kwahashi Seminar bụ maka ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ site na nke atọ na ndị okenye na ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Tụkwasị na nke ahụ, Keiko kụrụ Total Human Life Lectures (TL Ningen Kōza) na 1992. Ndị a na-elekwasị anya n'akụkụ asaa ọkachamara (azụmahịa, nkà mmụta ọgwụ, agụmakwụkwọ, sayensị, iwu, nkà, na ihe nkiri) na òtù dị iche iche ọmụmụ. N'ihe banyere 2005, ụfọdụ ndị òtù 350,000 esonyela n'usoro isiokwu ahụ, ya na ọtụtụ ndị na-emegharị.
Takahashi Keiko na-emepụta ọrụ ọhụrụ mgbe nile ma ọ bụ na-enye echiche ochie banyere ndụ ọhụụ na mgbagwoju anya. Isi ihe kpatara ya bụ inye ndị na-eso ụzọ usoro ha na-achọta uru iji dozie esemokwu onwe onye na nke ọkachamara na nke na-eme ka ndụ ha baa uru karị.
Takahashi Shinji nwere mmetụta dị ukwuu n'ọgbọ nke okpukpe ọhụrụ nke bilitere na iri asaa na Japan. Akụkụ nke arịrịọ ya bụ iji asụsụ sayensị na nkà na ụzụ eme ihe mgbe niile iji kọwaa ihe ime mmụọ dị mgbagwoju anya. Otu n’ime ihe atụ kasị amasị ya maka ịlọ ụwa bụ “mkpụrụ obi dị ka vidio vidio” nke mmadụ nwere ike ịkpọtụrụ ma kpọọ. Mana nke kachasị, Takahashi siri ọnwụ na akụkụ nke ụwa ime mmụọ. Ọrụ ebube abụghị ihe mere naanị n'oge gara aga mana a na-atụ anya ya dị ka ihe ịrịba ama nke ezigbo ndụ ime mmụọ ugbu a. Inweta Takahashi na mpaghara ndị a mere ka ọ bụrụ onye ndu dị egwu na onye nkuzi a hụrụ n'anya. Dịka ọmụmaatụ, Ōkawa Ryūhō, onye nchoputa na onye ndu ime mmụọ nke Science Science, bipụtara mkpokọta nke Takahashi Shinji's Sayings (Takahashi Shinji reigenshū) mgbe Takahashi nwụsịrị, na-azọrọ na ọ na-enye mmụọ nke nna ukwu nwụrụ anwụ n'oge na-adịbeghị anya. Okawa buru ụzọ nweta ọtụtụ ozizi ya site na GLA. Chino Yūko, onye nchoputa na onye ndu ime mmuo nke Chino Shōhō / Pana Wave Laboratory, chere na ya bu onye kwesiri ekwenye dika onye ozo nke Takahashi ma nweta otutu ihe omumu ya na Ezi Iwu (Na-emecha) kpọmkwem site na nkuzi ya.
Takahashi Shinji kụziiri ya shuhō n'ime mkparịta ụka siri ike ma na-emeghe bụ nke gụnyere ndụ ndị dị n'oge gara aga, ọhụụ, ọgwụgwọ, na nkuzi. Ọzọkwa, o kwadoro GLA site na iji uru nke Koden Co. rụọ ọrụ dị ka onye njikwa ụlọ ọrụ iji kwụọ ụgwọ ọrụ ozi ala ọzọ ma ọ dịghị mgbe ọ chọrọ ịghọ onye ọrụ okpukpe oge nile.
GLA n'okpuru Takahashi Keiko arụ ọrụ n'okpuru ọkwa dị iche iche. GLA a achọọ ịmepụta okpukpe nke na- na-akwado ma na-arụpụta akụ na ụba iji nọgide na-arụ ọrụ ndị ọkachamara, ụlọ ọrụ mba ụwa, na onye ndú okpukpe oge nile. N'ihi ya, GLA agbadoro ihe nlereanya nke ụlọ ọrụ, ndị na-akwado ya bụ ndị na-ebugharị akwụkwọ. Dika okpukpere chi si ele ihe omuma gbasara okpukpe anya, ulo GLA di ka ulo oru di elu ma obu na ulo uka ga-abia n'ime ulo n'ime ulo ahu nke nwere ihe osise nke Takahashi Shinji (oji na-acha oji) na Takahashi Keiko (na nyocha).
Ịbanye GLA dị mfe ime, ma ịghọ onye otu na-ahapụ mmadụ site n'ọnụ ụzọ. Ozugbo n'ime, onye novice enweghị ike ịdị na-agafe ngwa ngwa n'ebughị ụzọ na-adọta uche. E nwere nrụgide dị ukwuu iji nwekwuo ike itinye aka na ya, nke chọrọ nkwụsị, ọ bụghị obere, itinye ego na ego. Ná mmalite, naanị ịmụta ihe ndị dị mkpa chọrọ ọzụzụ nkuzi abụọ nke ọ bụla na-efu 15,000 yen (ihe dịka $ 150). Ndị Seminars na-akwụzi na 45,000 gaa 56,000 yen ($ 450-560). Ịga nzukọ ọmụmụ ọkachamara, itinye aka na nkụzi, na igosipụta àgwà kwesịrị ekwesị site na ịchụ onwe gị n'ọrụ na otu n'ime ụlọ ọrụ GLA ma ọ bụ ihe omume, ga-achọ ka enwekwu ego, ego, na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'echiche a, GLA ngwa ngwa na-aghọ onye na-elekọta usoro nlekọta zuru oke.
GLA ejiri nwayọ na-emegharị onwe ya iji nweta nghọta nke ụwa site na mkpesa na-agwọ ọrịa: ụdị mmadụ, agụmakwụkwọ, usoro iji jikọta ndụ ime na ebe ọrụ ma ọ bụ gburugburu ebe obibi. Ndị a nwere ike ịmepụta mkpali dị ike na nnọgidesi ike n'agbanyeghị nsogbu. Kaosinadị, micromanagement nke ndụ mmadụ oge niile agaghị amasị ndị mmadụ na-achọ ọtụtụ ụdị na njedebe na ndụ ha. Maka GLA anaghị ahapụ ohere maka ndụ na mpụga nke ụlọ ọrụ ahụ. Agakwaghị achụ enyi ochie ọ gwụla ma a kpọbatara enyi ahụ na GLA ma gosipụta onye nwere ike ịbụ.
Ọ bụ ezie na Shinji adịghị karịa ogwe aka ogologo, Takahashi Keiko bụ ọnụnọ n'ihu n'ihu ọtụtụ puku ndị na-ekiri ya. O nwere aura nke onye a ma ama tinyere ngwa nke ndị na-eche nche na ọrụ gọọmentị nke na-eme ka kọntaktị ọ bụla ghara ịba uru. N'echiche a, ọ ghọbeghị onye a na-apụghị ịmatacha mgbe ozizi ya na-enwewanye ahụmahụ na vidiyo ma ọ bụ usoro DVD iji lelee ya n'ọtụtụ ebe GLA gafee Japan mgbe mmadụ na-anọghị n'otu n'ime nzukọ nzukọ ndị ọ na-elekọta.
Mana ma eleghị anya, ihe ize ndụ kasịnụ nke ìgwè ahụ na-eche ihu bụ n'ụzọ bụ isi isi dozie nsogbu. Seekchọ ihe kpatara esemokwu ọ bụla n'ime onwe ya na n'ụzọ dị otú a iji chọpụta ezigbo mmadụ onwe ya na-atụ aro ka a gbanwee ọnọdụ ọ bụla kama inwe mkparịta ụka na-agbanwe agbanwe na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Wepu na ịchọta onwe gị na-arụ ọrụ mgbe niile kama ịchọ mgbanwe ebe ha nwere ike ịchọrọ, na ụlọ ọrụ ma ọ bụ na ọha mmadụ n'ozuzu, na-anọchite anya nzaghachi siri ike. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, nzukọ a nwere nwayọ na-eme ka GLA sie ike na West ebe ọ dị mfe ịpụta dị ka òtù nzuzo n'agbanyeghị na ọ na-azụlite ọdịdị nke ụwa na usoro na usoro ndị yiri nke ọma.
* Ihe profaịlụ a dabere na edemede edemede nke PhD. Lee Whelan, Christal. 2007. Azịza nke okpukpe banyere Ijikọ ụwa ọnụ na Japan: Ụdị Ìhè nke Chineke. Ph.D. akwụkwọ, Ngalaba Anthropology, Mahadum Boston, Boston, Massachusetts.
Numata Ken'ya. 1991. "Shinshūkyō no kyōjin: Takahashi Shinji no sugao." Gekkan Asahi 3: 13: 50-55.
Omura Eishō na Nishiyama Shigeru. 1988. Gendaijin no shezoō. Tokyo: Yuhikaku.
Ozawa-de Silva, Chikako. 2006. Okpukpe Uche na Okpukpe na Japan: Omume Nyocha nke Japanese nke Naikan. New York: Routledge.
Whelan, Christal. 2011. "Metaphorical na Metony Chemical Science: Ịrụpụta Nchịkwa na New Religion Japanese." Pp. 165-83 na Okpukpe na ikike nke sayensị, nke James R. Lewis na Olav Hammer dere. Leiden: Akwụkwọ dị mma.
Whelan, Christal. 2007. "Mmeghachi omume okpukpe maka Ijikọ ụwa ọnụ na Japan: Ụdị Ìhè nke Chineke." Ph.D. akwụkwọ, Ngalaba Anthropology, Mahadum Boston, Boston, Massachusetts.
Whelan, Christal. 2006. "Mgbanwe na Paradaịs na Mediating Media: Na-agbaputa Okpukpe Ọhụrụ dị ka" Rational "na Contemporary Society." Nova Religio 10: 3: 54-72.
Wieczorek, Iris. 2002. Neue religiọ bụ Bewegungen na Japan. Hamburg: Institut für Asienkunde.
Winter, Franz. 2012. Hamis na Buddha: Die Neureligiöse Bewegung KỌ dịghị Kagaku na Japan. Berlin: LIT Verlag.
Yamaori Tetsuo. "Gbasara gị na - GLA Kyōdan no baai." Pp. 126-48 na Rei ka nikutai. Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppan-kai.